परीक्षा नदिएरै कसरी आयो करिश्माको एसइईको मार्कसिट? - Everest Dainik - News from Nepal
परीक्षा नदिएरै कसरी आयो करिश्माको एसइईको मार्कसिट?
बैतडीः सुन्दै अचम्म लाग्ने कुरा ! परीक्षा नदिएर कुनै विद्यार्थीको मार्कसिट आउँछ?, आउँदैन । तर, बैतडीमा भने कक्षा १० को पढाई छाडेर एसईई परीक्षा समेत नदिएर ‘लब म्यारेज’ गरेर हिँडेकी करिश्मा चन्दको एसईईको मार्कसिट आएको छ ।
जिल्लाको सिगास गाउँपालिका–५, ढुङ्गाढ स्थित सारदा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिश्मा चन्दको एसईईको मार्कसिट आएको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक मीनबहादुर चन्दले एसईई परीक्षामा सहभागी नभए पनि करिश्मा चन्दको १.६५ जिपिएको मार्कसिट आएको बताए । करिश्मा चन्दको एसईई मार्कसिटमा रहेको सिम्बोल नम्बर ०७५११८० ‘एन’ र जन्म मिति २०५५ साल फागुन ५ गते रहेको छ ।
प्रधानाध्यापक चन्दले भने, ‘करिश्मा चन्द कक्षा १० मा भर्ना भएर दुई–तीन महिना पढेर विद्यालय आउन छोडेकी हुन् । परिवारबाट विवाह गरेर डोटी गएको खबर पाएपछि विद्यालयले एसईई फाराम भरेन । परीक्षामा कतै सहभागी पनि नभएकी करिश्माको अचानक कसरी मार्कसिट आयो? हामी अचम्ममा परेका छौं ।’
याे पनि पढ्नुस एसइई नहुने, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा सार्वजनिक गरिने
परीक्षा नदिएर पनि छोरीको मार्कसिट आएकोमा बुवा केशवबहादुर चन्दले खुशी हुँदै विद्यालयले मार्कसिट दियो भने छोरीको घरमा पुर्याई दिने बताए । चन्दले भने, ‘पढ्न स्कुल पठाएकी छोरी मोबाईलबाट डोटीतिरको केटासंग कुराकानी हुँदो रहेछ । भागेर गएको हामीले पनि निकै दिनपछि थाहा पायौं । फोनले गर्दा छोरीको पढाई बिग्रेकोमा चिन्ता लागेको थियो । परीक्षा नदिए पनि सर्टिफिकेट आएछ ! अचम्मै भयो नि !’
एसईई परीक्षा नदिए पनि मार्कसिट आएको विषयमा करिश्मा चन्दले समेत आश्चर्य प्रकट गरिन् । डोटीबाट फोनमा कुरा गर्दै करिश्माले भनिन्, ‘हेर्नु न दाइ ! फोनबाट कुराकानी हुँदा डोटीको केटासँग लब पर्यो । पढाई छाडेर नभागेको भए कति राम्रो हुने थियो । श्रीमानले पनि पढाई छोडेर रोजगारीका लागि भारत जानु भएको छ । नरमाईलो भयो मेरो त जिन्दगी ।’
याे पनि पढ्नुस एसइई सञ्चालनको विकल्पबारे कार्यदलले सुझाव तयार गर्दै
एसईई परीक्षा नदिएरै करिश्मा चन्दको कसरी मार्कसिट आयो? भन्ने विषयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईमा रहेका एसईई दिने विद्यालय र परीक्षार्थीको नामावली खोज्दा सारदा माध्यमिक विद्यालय ढुङ्गाढको फाईलमा करिश्माको नाम भेटिएन ।
अझै खोजी गर्दै जाँदा करिश्मा चन्दको एसईई मार्कसिटमा रहेको सिम्बोल नम्बर ०७५११८० ‘एन’ र सोही विद्यालयबाट परीक्षा दिने परीक्षार्थी सरिता लुहारको पनि सिम्बोल नम्बर ०७५११८० ‘एन’ एउटै रहेको फेला परे पनि जन्म मिति भने फरक रहेको छ ।
सरिता लुहारको रजिष्ट्रेशन फाराममा जन्ममिति २०५७ असार १० गते उल्लेख छ भने करिश्मा चन्दको मार्कसिटमा जन्म मिति २०५५ साल फागुन ५ गते रहेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद अवस्थी लगायतका कर्मचारीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको एसईई परीक्षाको नतिजा हेर्न मिल्ने साईटमा गएर सिम्बोल नम्बर ०७५११८० ‘एन’ टाईप गर्दा करिश्मा चन्द नाम गरेकै विद्यार्थी फेला परेको छ ।
याे पनि पढ्नुस ‘एसइई स्थगन हुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग क्षमाप्रार्थी छौं’
शिक्षा समन्वय अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सरिता लुहारले मार्कसिट नपाएको भए सरिताकै हुन सक्ने बताए । समन्वय अधिकारी अवस्थीले भने, परीक्षा नै नदिएको विद्यार्थीको कसरी मर्कसिट आयो? योत अचम्म भयो । यदि सरिता लुहारले मार्कसिट नपाएको भए करिश्माको नाममा आएको मार्कसिट सरिताको हुनुपर्छ र मार्कसिट पाउन सरिताले निवेदन दिनुपर्छ ।
यो विषयमा सारदामा मावि ढुङ्गाढका प्रधानाध्यापक मीन बहादुर चन्दले सरिता लुहारले नियमित अध्ययन गरेर एसईई परीक्षा दिए पनि मार्कसिट नआएको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: एसइई, करिश्मा चन्द, मार्कसिट